Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo weligii ka soo horjeeday Kenya - BBC News Somali
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo weligii ka soo horjeeday Kenya
Xilli xaalad xasaasi ah ay ka dhex taagan tahay Kenya iyo Soomaaliya , islamarkaasna ay dadka aragtiyo kala duwan ka qabaan sida ay wax u dhacayaan, ayaa waxaa jira xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo fikradda uu ka qabo dowladda Kenya aysan waligeed is badelin.
Kenya ayaa qaaday tallaabooyiin u muuqda in ay cadaadis ku saareyso dowladda Soomaaliya kadib markii ay labada dal isku fahmi waayeen dhul badeed ku yaala cirifka sii koonfureed ee Soomaaliya.
Arrimihii ugu dambeysay ee ay muranka cirka kusii shareertay ayaa ahaa in wafdi heer sare ah oo Soomaaliya ka socday loo diiday in ay Nairobi soo galaan iyo in duullimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi loo leexiyay dhanka Wajeer.
Haddaba maxay noqon kartaa jawaabta ay Soomaaliya ka bixin karto falalka Kenya?
Waxay u egtahay in xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay hayaan jawaabta su'aashaas sida ay iyaga la tahay, waxayna qabaan in la keeno mooshin ka dhan ah ciidammada Kenya ee Soomaaliya ku sugan loo gudbiyo baarlamaanka Soomaaliya, si dalka looga saaro.
Baarlamaanka Soomaaliya ma leeyahay nidaam lagu xakameeyo Warbaahinta?
Waxaa ka mid ah Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo muddadii uu baarlamaanka ka tirsanaa markasta hor kacayay mooshinno iyo go'aanno ka dhan ah dowladda Kenya iyo ciidankeeda ku sugan Soomaaliya ee ka tirsan AMISOM.
Isbuucan, wuxuu Baarlamaanka u sheegay in Kenya lagu amro in ay ciidammadeeda ka saarto Soomaaliya, taas oo uu doonayay in cadaadis looga dhigo dhanka Kenya.
Haddaba maxaa ku qasbay?
Sida uu BBC Soomaali u sheegay, xildhibaan Daahir wuxuu doonayaa in labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku wada noolaadaan "si walaaltinimo iyo deris wanaag ah".
"Shacabka aan matalo Kenya-ba way degaan. Colaad kale oo dheeri ah oo aan u qabo ma jirto, oo aanan ka ahayn in ay xadgudbeyso (Kenya) oo xuquuqdii Soomaalinimada ay ku xadgudbeyso" ayuu yiri Daahir Amiin Jeesow.
Wuxuu tilmaamay inuu jecelyahay in aan la is xumeyn oo deris wanaagga la wada ilaaliyo. "Waxaan nahay dad derisah, waanan ahaan doonaa", ayuu yirii.
Kenya ayaa qeyb ka ah dalalka ciidammada ku biiriyay howgalka AMISOM ee Soomaaliya, waxayna inta badan askarteeda ka howgalaan gobollada maamulka Jubaland.
Muxuu saluugsan yahay
Daahir Amiin Jeesow oo la hadlay BBC Soomaali ayaa sheegay in mooshinka hadda ay diyaarinayaan uu yahay mid ay xildhibaanada oo dhan u siman yihiin oo uusan ahayn mid uu keligii wato.
"Waan ku guda jirnaa in uusan hadal keli ah noqon ee sharci ay noqoto. Waxyaabaha qaar ee sababaya in ciidammada Kenya oo qaarkood ay AMISOM ka tirsan yihiin, aan ka maaranno waxa ay tahay; mar haddii iska hor imaadyada faraha badan ee diblumaasiyadeed ee colaadda ay ka muuqato ee Kenya ay u qabto ummadda Soomaaliyeed aan aragnay", ayuu yiri xildhibaanka.
Wuxuu intaa ku daray in sharci iyo qaraar baarlamaan ay soo saari doonaan. "Waan rajeynayaa in baarlamaanka Soomaaliya ay si aqlabiyad ah ku meel marin doonaan arrintaas", ayuu sheegay.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa aaminsan in Kenya ay la timid "diblumaasiyad xumo". Wuxuu sheegay: "Annagoo u aragnay dad deris ah oo aanan kala maarmin ayay Kenya xaaladda uga sii dartay."
"Arrimihii badda ayey siyaasadeyneysaa oo ay dooneysaa in ay cadaadis ka sameyso, oo shacabka Soomaaliya cadaadis ku saarto. Waxaas oo dhan waan fahansannahay. Anaga waxaan jecelnahay deris wanaagga iyo si sharciga waafaqsan lagu kala baxo", ayuu yiri Daahir Amiin Jeesow.
Maqal Falanqeyn: Maxaa laga filanayaa doorashada afhayeenka baarlamaanka
Muuqaal Haweeney kaga adkaatay laba rag ah doorashada baarlamaanka